Iindaba -Ndwendwela kwaye ujonge imicroscope esemgangathweni ngaphambi kokuthunyelwa komyalelo wabathengi baseDenmark ngo-2019.
U-Opto-Edu unomthengi wakudala osuka eDenmark ngaphezulu kweminyaka eyi-15, e-odola ngaphezulu kweemodeli ze-microscope ze-30 ixesha elide, umthamo wentengiso ngaphezulu kwe-1000 ukuya kwi-1500 ii-pcs ngonyaka ngamnye.
Nokuba iodolo nganye ayikho nkulu kangako, kodwa njengoko ibandakanya iimodeli ezininzi, umthengi uneemfuno ezininzi zenkcukacha ezivela kwilogo yoshicilelo, umbala wepeyinti, ukupakisha iibhokisi kuhlolo lomgangatho. Emva kokuba kuthunyelwe ngenqanawa nganye, umthengi uya kuthumela uluhlu lweempendulo, athi onke amanqaku kufuneka aphuhliswe kwii-odolo ezizayo. Umthengi unethemba lokuba uninzi lweengxaki zinokuhlolwa kwaye zisonjululwe ngaphambi kokuba zithunyelwe kumzi-mveliso waseOpto-Edu, ukuqinisekisa ukuba ii-microscopes abazifumeneyo zenziwe kakuhle kwaye zipakishwe, banokuyithengisa imicroscope ngaphandle komsebenzi omninzi kunye nexesha elisetyenzisiweyo kuvavanyo.
Ukuhlangabezana nale mfuno, u-Opto-Edu wenze amaxwebhu amaninzi olawulo lomgangatho, exoxa nefektri ubuso ngobuso amaxesha amaninzi, wazama ukuqinisekisa ukuba inqaku ngalinye lihlolwe kakuhle ngaphambi kokuba zithunyelwe. U-Opto-Edu uthumele abantu babo ukuba bahlale kwifektri ukuba balandele imveliso, iphakheji kunye nokuhlolwa. Ekugqibeleni siya kwenza uhlolo lwethu ngokwazo zonke iimfuno zomthengi.
Ngale ndlela, iOpto-Edu iseke inkqubo esemgangathweni ngendlela yabo, ukuhlangabezana neemfuno zomgangatho kubathengi. Kubathengi abakhulu nababalulekileyo, iOpto-Edu ibonelela ngenkonzo yokuhlola esemgangathweni ukukhusela izibonelelo zabathengi, kunye nokuphumelela kwintengiso yohlobo lweOpto-Edu.
Njengomnye wabanikezeli bobuchwephesha kwicandelo lemicroscope e-China, sineemodeli ezingaphezu kwe-1500 kuludwe lwethu lokubonelela, kwisicelo ngasinye kunye nemfuno, sinokukhetha kwaye sicebise i-microscope eyi-1-3 egqwesileyo kwintengiso yaseChina kubathengi bethu. Siyakuqinisekisa ukuba uyakufumana eyona microscope EBONELELWEYO YOKUKHETHA iimfuno zakho!
Intlawulo ngu-T / T, PayPal, West Union ukuya kwi-LC! - +
Ukuba unemibuzo engaphezulu, rhuma umyalezo kuthi ngoku, siya kungena ngaphakathi kwebala ngaphakathi kweeyure ezingama-24!